एपिएफको जितमा सरस्वतीको रेलिगेसन खतरा बढ्यो ! | Hamro Khelkud
एपिएफको जितमा सरस्वतीको रेलिगेसन खतरा बढ्यो !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– नेपाल एपिएफ महेन्द्रा फुटबल टिमले कतार एयरवेज सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसन खतरालाई कम गराएको छ । एनआइबिएल फ्रेन्ड्स क्लबलाई सोमबार ५–२ ले हराउँदै एपिएफले रेलिगेसनलाई टार्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ । यद्दपी त्यसका लागि टोलीले अन्य खेलको नतिजा भने कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तिम चरणको खेल बाँकी रहँदा एपिएफको ८ अंक पुगेको छ । लिगमा दोस्रो जित हासिल गरेको एपिएफले २ खेलमा बराबरी र ८ खेलमा हार बेहोरेको छ । यद्दपी टोली १३ औं स्थानमा यथावत छ । १२ औं स्थानमा रहेको ब्रिगेड ब्वाइज क्लब (बिबिसी) को पनि ८ अंक नै छ ।
पुछारमा रहेको सरस्वती युथ क्लबको ४ अंक छ । सरस्वतीले आजै च्यासल युथ क्लबको सामना गर्दैछ । च्यासलसँगको खेल गुमएको खण्डमा सरस्वती अन्तिम खेल अघिनै रेलिगेसनमा पर्नेछ । बिबिसीले भने मंगलबार शीर्षस्थानको आर्मीको सामना गर्नेछ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एपिएफको जितका लागि आशिष लामा र प्रविणकुमार स्याङ्तानले समान २ र कप्तान टोपबहादुर विष्टले १ गोल गरे । फ्रेन्ड्सका लागि दोस्रो हाफमा फिलिपे डिसोजा र विश्व अधिकारीले गोल फर्काए ।
आशिषले १२ औं मिनेटमा गोलको खाता खोले भने उनले नै ४० औं मिनेटमा अर्को गोल गरे । फ्रेन्ड्सका लागि फिलिपेले ६९ औंमा गोल फर्काउँदै अन्तर घटाए । ७१ औ. मिनेटमा एपिएफका लागि प्रविणले गोल गर्दै पुनः गोल अन्तर बढाए ।
त्यसको ५ मिनेट पछि विश्वले फ्रेन्ड्सका लागि गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे । तर इन्ज्युरी समयको चौथो र पाँचौं मिनेटमा एपिएफले गोल गर्दै जित निश्चत गर्यो । इन्ज्युरी समयको चौथो मिनेटमा टोपबहादुर र पाँचौं मिनेटमा प्रविणले गोल गरेका थिए ।